Ithegi: ukuvavanya | Martech Zone
Ilifu lobuGcisa eliKhuselekileyo: Ungasisebenzisa njani isiQinisekiso seNjini ukuya ku-A / B kuvavanyo oluNgcono, kwaye ngokukhawuleza
NgoLwesibini, Agasti 24, 2021 NgoLwesibini, Agasti 24, 2021 URyan Lucht
Ukuba ujonge ukuqhuba inkqubo yokulinga ukunceda uvavanyo lwakho lweshishini kunye nokufunda, amathuba okuba usebenzisa i-Optimizely Intelligence Cloud - okanye ubuncinci uyijongile. Ngokufanelekileyo esinye sezixhobo esinamandla kulo mdlalo, kodwa njengaso nasiphi na isixhobo esinjalo, ungayisebenzisa gwenxa ukuba awuyiqondi ukuba isebenza njani. Yintoni eyenza ukuba amandla abe namandla ngokugqibeleleyo? Isiseko seseti yento yayo ilele yeyona inolwazi kwaye
Uvavanyo lomsebenzisi: Ekufuneni ulwazi lomntu ukuze uphucule amava abaThengi
NgoLwesithathu, Aprili 14, 2021 NgoLwesithathu, Aprili 14, 2021 Douglas Karr
Intengiso yale mihla imalunga nomthengi. Ukuze uphumelele kwimarike ejolise kubathengi, iinkampani kufuneka zijolise kumava; Kuya kufuneka babonakalise uvelwano kwaye bamamele ingxelo yabathengi ukuze baphucule ngokuqhubekayo amava abawenzayo kunye nokuhambisa. Iinkampani ezamkela ukuqonda kwabantu kunye nokufumana ingxelo esemgangathweni kubathengi bazo (kwaye hayi idatha yophando nje) ziyakwazi ukudibana ngcono nokunxibelelana nabathengi kunye nabathengi ngeendlela ezinentsingiselo ngakumbi. Ukuqokelela umntu
Isikhokelo sokwenza i-imeyile yakho ivule, cofa uQedile, kunye namaxabiso okuGuqulwa
NgoMgqibelo, nge-13 kaFebruwari ngo-2021 NgoMgqibelo, nge-13 kaFebruwari ngo-2021 Douglas Karr
Ingxoxo enye endinayo veki nganye kunye nabaxumi yindlela ekhathazayo ekhulayo yokwakha kunye nokugcina inkqubo ephumeleleyo yokuthengisa nge-imeyile. Ukubeka ngokulula, njengoko uluhlu lwakho lokuthengisa nge-imeyile lukhula, kunjalo nentloko yakho yokuhambisa. Kubonakala ngathi ababoneleli ngeenkonzo ze-intanethi balishiyile naliphi na ithemba lokufumana eyona mikhwa mihle kwaye banezilumko ezizizidenge eziqhubeka nokohlwaya abathumeli abalungileyo. Kwimeko kwinqanaba, omnye woogxa bam kumzi mveliso ufumene i-Yahoo! vimba i-100%
Iimpawu ezine eziqhelekileyo zeenkampani eziguqule ukuThengisa kwazo kwidijithali
NgoMvulo, Agasti 13, 2018 NgoMvulo, Agasti 13, 2018 Douglas Karr
Kutshanje bendonwabile ukujoyina i-CRMradio podcast kunye noPaul Peterson waseGoldmine, sixoxa ngendlela iinkampani, ezincinci nezikhulu, ezisebenzisa ngayo intengiso yedijithali. Ungayimamela apha: https://crmradio.podbean.com/mf/play/hebh9j/CRM-080910-Karr-REVISED.mp3 Qiniseka ukuba uyarhuma kwaye umamele iCRM Radio, baneendwendwe ezintle kwaye Udliwanondlebe olunolwazi! UPaul wayengumbuki zindwendwe omkhulu kwaye sasihamba sinemibuzo embalwa, kubandakanya neendlela endizibonayo, imiceli mngeni kumashishini eSMB, iingqondo ezithintela
Iimpazamo ezi-5 zoHlahlo-lwabiwo mali zokuThintela
NgoMvulo, Agasti 14, 2017 NgoMgqibelo, nge-13 kaFebruwari ngo-2021 Douglas Karr
Enye yezona zinto zabelwana ngabantu esazenzayo yayikukuthetha noHlahlo-lwabiwo mali lweNtengiso lwe-SaaS kwaye kanye ipesenti yengeniso iyonke eyayichithwa ziinkampani ezithile ukugcina nokufumana isabelo sentengiso. Ngokumisela uhlahlo-lwabiwo mali lwakho kwipesenti iyonke yengeniso, ibonelela iqela lakho lokuthengisa ukuba lonyuse ngokunyuka ibango njengoko iqela lakho lokuthengisa lifuna njalo. Uhlahlo lwabiwo-mali olucwangcisiweyo luvelisa iziphumo ezisicaba… ngaphandle kokuba ufumana ukonga kwindawo ethile kumxube. Le infographic evela kwiNtengiso ye-MDG,